अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ ब्रेन फग रोग, के हो ? कसरी जोगिने ! - Khabar Break | Khabar Break
ब्रेन फग रोग लागेपछि सोच्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ । यसो हुँदा जतिखेर पनि कन्फ्युज्ड र डिसअर्गनाइज्ड फील गरिन्छ । तपाईंले सोचेको र बोलेको कुरामा अन्तर हुन्छ ।
एरिजोना विश्वविद्यालयबाट एमडी गरेका विलियम ब्लाह्दले बताएअनुसार, यो रोगले मानिसको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई प्रभावित गरेर दिमागमा असर पार्छ ।
यसलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस पनि भनिन्छ । धेरै मानिसलाई स्मरणक्षय, ध्यान केन्द्रित नहुने समस्या अनि योजना बनाउने र बोल्ने समस्या हुन्छ ।
स्मरण अभ्यासले तपाईंलाई सहायता दिन सक्छ । थेरापिस्टको सहयोग लिएर तपाईं रोग हटाउन सक्नुहुन्छ ।
डिप्रेसन हुँदा मानिस ब्रेन फग फील गर्छन् । यसबाट ऊर्जा क्षय हुन्छ । डिप्रेसन हटाउन मेडिकेसन र टक थेरापी प्रयोग गरेर समस्या हटाउन सकिन्छ ।
केमोथेरापीमा प्रयोग गरिने औषधि कडा हुन्छन् । त्यसले पनि रोगीलाई चीजहरू याद राख्न समस्या ल्याउँछ । उसले नाम र मिति याद गर्न सक्दैन । काम सक्न पनि उसलाई समस्या हुन्छ । उपचारपछि यो ठीक त हुन्छ तर केही मानिसलाई यसले लामो समयसम्म दुःख दिन्छ ।
महिलामा ब्रेन फगको समस्या रजोनिवृत्तिको ठीकअघि पनि हुन्छ । लास्ट पिरियड आउनुअघि महिलाहरू ब्रेन फग अनुभव गर्छन् । अनि उनीहरूलाई अचानक पसिना आउने र मुटुको धड्कन स्तर बढ्ने तथा शरीरको तापक्रम बढ्ने समस्या हुन्छ । यसो भएमा चिकित्सकसँग अवश्य परामर्श गर्नुस् ।
केही महिलाहरूलाई प्रेग्नेन्सीका बेलामा कुराहरू सम्झिन गाह्रो हुन्छ । गर्भवती हुँदा आमाको शरीरमा रिलिज हुने रसायनले बच्चालाई रक्षा र पोषण दिन्छन् । तर यसले स्मरणशक्ति पनि हर्छन् । यस्तो लक्षण देखिनेबित्तिकै चिकित्सकलाई बताइहाल्नुस् ।